Wasiir Axmed Shidde Iyo Madaxweyne Mustafe Cagjar Oo La Filaayo In Loo Doorto Madaxda Xisbiga Degaanka Soomaalida Itoobiya – somalilandtoday.com
Wasiir Axmed Shidde Iyo Madaxweyne Mustafe Cagjar Oo La Filaayo In Loo Doorto Madaxda Xisbiga Degaanka Soomaalida Itoobiya
(SLT-Jigjiga)Magaalada Jigjiga ee Xarunta Dowlad Degaanka Soomaalida waxaa maanta ka furmay Shirweynaha Tobanaad ee Xisbiha haya talada dowlad degaanka.
Isbeddellada shirkan laga filayo waxaa ka mid ah hoggaanka sare waxaana jira warar soo baxaya oo sheegaya in Wasiirka Maaliyadda Itoobiya Axmed Shide loo dooranayo guddoomiyaha Xisbigaas halka Mustafe Cagjar uu noqonayo Guddoomiye ku xigeenka Xisbiga.
Labada mas’uul midkooda horay xisbiga uguma jirin haddii ay sidaasi dhacdana waxaa ay noqoneysaa in Xisbiga Dowlad degaanka Soomaalida uu isbeddelo hoggaankiisii iyo golihii xisbigaasi ka koobnaa.
Shirkan waa kii ugu horreeyay ee la qabto tan iyo markii xilka Madaxweynaha laga qaaday Cabdi Maxamuud Cumar oo isku ahaa Guddoomiyaha Xisbiga iyo Madaxweynaha Dowlad degaanka.
Shirka oo shalay ku billowday doodo ayaa soconaya ilaa 3da Bishan April,waxaa lagu dooranayaa Guddoomiyaha Xisbiga, ku xigeenkiisa, Guddiga fulinta Xisbiga iyo xubno kale.
Bishii January ee la soo dhaafay labada Nin waa Mustafe iyo Axmed shidde ayaa isku dhacay,waxaana arrintaas farageliyay Ra’isalwasaaraha Itoobiya oo labadaba kulan kula yeeshay Adis ababa, halkaas oo lagu xalliyay khilaaf u dhaxeeyay.
Sidoo kale gaba gabada shirka waxaa magaca looga beddeli doonaa Xisbiga oo laga reebayaa magaca Itoobiya oo horay ugu jiray lana dhihi jiriay ESPDP) iyada oo laga jarayo xarafka hore lagana dhigayo SPDP.